यस्तो गाउँ जहाँ विवाहपछि बेहुलाको साथीसँग बेहुलीले यस्तोसम्म गर्नुपर्छ…..[हेर्नुहोस भिडियो सहित] – Life Nepali
काठमाडौं । नेपालमो उत्तरी छिमेकी देश चीनमा अनौठो परम्पराहरु रहेका छन् । चीनका मानिसहरुको बारेमा भनिन्छ, उनीहरु रोमान्टिक विचारको मामलामा अलिकति रुढिवादी नै हुन्छन् । तर विहेपछि खेलिने खेल (वेडिङ,गेमको)को सन्दर्भमा उनीहरु खुला विचारका हुन्छन् । यस्तोमा एक वेडि ङ गेमको भिडियो सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल बनेको छ । जसमा बेहुलाका साथीहरु उनकै अगाडी उनकी श्रीमतीका लुगाहरु फु,का लिरहेका छन् । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
कसैले उनीहरुको बोली सुनेर उनीहरु मध्य चीनको हेनान प्रान्तका हुन् भनेर दावी गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म यो भिडियो लाखौ मानिसहरुले हेरिसकेका छन् । चीनमा नवविवाहित जोडीको पुरै काम गरेर घर गएपछि यस प्रकारको गेम राखिन्छ
Previous सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ , तर यो सत्यता नै हो ! आमा बन्दै श्वेता खड्का ! पूरा हेर्नुहोस
Next यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले यसरी बेचौं !